Tilmaam dhameystiran oo ku saabsan adeegsiga Navigator-ka iibiya LinkedIn | Martech Zone
LinkedIn waxay isbeddel ku sameysay sida ganacsiyada ay isugu xirmaan. Ka faa'iideyso barnaamijkan adoo adeegsanaya qalabkiisa Navigator Sales.
Ganacsiyada maanta, iyadoon loo eegin sida ay u weyn yihiin ama u yar yihiin, waxay ku tiirsan yihiin LinkedIn shaqaaleynta dadka adduunka oo dhan. Iyadoo in ka badan 720 milyan oo isticmaaleyaal ah, barnaamijkan ayaa maalin walba sii kordhaya cabir ahaan iyo qiime ahaanba. Qoritaanka ka sokow, LinkedIn hadda waa mudnaanta koowaad ee suuqleyda doonaya inay sare u qaadaan cayaartooda suuq geynta dijitaalka ah. Laga bilaabo sameynta isku xirnaanta abuurista jihooyin iyo abuurista qiimo sumadeed wanaagsan, suuqleydu waxay tixgeliyaan LinkedIn wax lagu daro qiimo leh guud ahaan istaraatijiyad marketing.
LinkedIn Suuqgeynta B2B
Waxyaabaha kale, LinkedIn waxay saameyn weyn ku yeelatay suuqgeynta B2B. Iyada oo ku dhowaad 700 milyan oo ganacsi oo ka socda 200 + waddan ay ku sugan yihiin barnaamijkan, hadda waa ilo aad u qiimo badan oo loogu talagalay ganacsiyada B2B. Daraasad ayaa muujisay taas 94% dadka suuqa B2B isticmaal LinkedIn si aad ugu qaybiso waxyaabaha ay ka kooban yihiin. Aasaasayaasha shirkadda B2B iyo Maamulayaasha guud waxay isku dayayaan inay noqdaan Saameeyayaasha LinkedIn iyaga oo ku dhisaya is-magacooda qoraallo sheeko si loo kordhiyo gaaritaanka dabiiciga, kor loogu qaado wacyiga sumadda, iyo natiijada, kor u qaadista iibka.
Wakiillada iibku kama dambeeyaan, waxay dhisayaan godad iib ah oo ku yaal LinkedIn oo ugu dambeyntii u horseeda jiil iibsi sare. Iibka Navigator, oo ah aalad ay leedahay 'LinkedIn' ayaa loogu talagalay in lagu socodsiiyo hanaankan heerka xiga. Navigator-ka 'LinkedIn Sales Navigator' wuxuu u eg yahay nooc gaar ah oo LinkedIn laftiisa ah. In kasta oo LinkedIn ay durba waxtar u leedahay iibinta bulshada, iibiyaha Navigator wuxuu bixiyaa astaamo badan oo dheeri ah oo kuu oggolaanaya adiga inaad ka heshid rajo xitaa dhakhso niche.
Adigoon ku sii dheerayn, waa kuwan hage dhaqso ah oo kaa caawinaya inaad ku bilowdo qalabkan.
Waa Maxay Navigator-ka Iibsiga ee LinkedIn?
LinkedIn Sales Navigator waa aalad iibinta bulshada oo kuu sahlaysa inaad ku hesho fursado ku habboon ganacsigaaga. Waxay sidaas sameysaa iyadoo siineysa xulashooyin sifeyn qoto dheer leh oo ku saleysan faahfaahinta isticmaale kaas oo kuu oggolaanaya inaad socodsiiso raadinta horumarsan ee helitaanka rajada saxda ah ee aad u baahan tahay
Isticmaalka Navigator Iibiyaha, wakiilada iibka waxay raadiyaan dariiqyada muhiimka ah, kormeeraan howlahooda, waxayna raadiyaan xiriiro la mid ah oo ay la xiriiri karaan. Tani waxay awood u siinaysaa inay tallaabo hore u qaadaan cayaartooda iyagoo dhisaya dhuumaha waxtarka leh si ay u soo saaraan iib wanaagsan.
Iibinta casriga ahi way shaqaysaa (waana jecel nahay). Isticmaalayaasha Navigator Sales waxay la kulmaan kor u kac + + 7% ah heerka guusha ee howlaha iibinta casriga ah.
Sakshi Mehta, Maareeyaha Suuqgeynta Wax soo saarka Sare, LinkedIn
Kahor intaadan quusin isticmaalka, bal aan eegno bal in Iyana Iibiyaha Navigator runti adiga loogu talagalay iyo in kale.
Yaad U Adeegsaneysaa Navigator Naqshadeynta ah ee LinkedIn?
Navigator-ka 'LinkedIn Sales Navigator' waa midka saxda ah ee aad u baahan tahay haddii aad tahay iibiyaha B2B.
Iibsiga Navigator waa badeecad lacag la siinayo oo loo heli karo qof kasta oo ka tirsan LinkedIn. Diiwaangelintu way ka duwanaan kartaa Waad dooran kartaa shaqsi, koox, ama nooc ku-qorid shirkad iyadoo loo eegayo baahiyahaaga iyo baaxadda shirkaddaada.
LinkedIn Sales Navigator wuxuu noo ogolaanayaa inaan ka helno milkiilayaasha ganacsiyada ee ururka oo aan u tagno iyaga ka hor inta aysan eegin lix shey oo kala duwan si ay uga dhigaan inay u arkaan dhibaatooyinkooda si kala duwan uguna dambeyntii fahmaan inay jirto runtii hal xalka ugu fiican.
Ed McQuiston, VP Global Sales, Barnaamijka Hyland
Baro sida Hyland, Akamai Technologies, iyo Guardian ay ugu adeegsadeen LinkedIn Sales Navigator iibinta bulshada.
Sida loo Isticmaalayo Navigator-ka iibiya LinkedIn
Laga bilaabo aasaasiga Aasaasiga Navigator si looga faa'iideysto qalabkan sanadka 2020, waxaan kaa daboolay dhamaan dhinacyada. Waa tan sida aad uga bilowdo xoqida.
1. Bilow Tijaabadaada Bilaashka ah
Waxa ugu horeeya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad tagtaa Bogga Navigator Iibinta oo guji bogga Bilow Tijaabadaada Bilaashka ah ikhtiyaar LinkedIn waxay kuu ogolaaneysaa inaad isticmaasho Navigator Iibinta bilaash 30 maalmood. Marka, hubi inaad si buuxda uga faa'iideysato taas bishaada koowaad.
Waxaad u baahan doontaa inaad bixiso macluumaadka kaarkaaga deynta si aad ugu qorto dalabkan. Intaa waxaa sii dheer, wax lacag ah lagaa qaadi maayo haddii aad joojiso rukunkaaga ka hor intaan tijaabadu dhammaan.
Kadib waxaa lagugu jiheyn doonaa websaydhka Iibsiga Navigator-ka, oo iyadu waa barxad ka duwan kaligeed. Wax kasta oo aad halkan ku sameyso saameyn kuma yeelan doonto koontadaada 'LinkedIn' caadiga ah.
2. Samee Koontadaada
Markaad iska diiwaangeliso koonto, waxaad u baahan tahay inaad dejiso dookhaaga si waafaqsan.
Waad shakhsiyeyn kartaa koontadaada Navigator ee dejinta dookhyada sida cinwaannada shaqada, toosnaanta, iyo gobollada aad rabto inaad bartilmaameed ka dhigato.
Marka ugu horeysa, Navigator-ka Iibka wuxuu ku siin doonaa ikhtiyaar aad ku badbaadin karto isku xirnaantaada LinkedIn ee jira sida hoggaanka. Intaa waxaa sii dheer, waxaad sidoo kale la jaanqaadi kartaa iibiyaha Navigator-ka Salesforce ama Microsoft Dynamics 365 si aad u soo dhoofiso dhammaan xiriiradaada iyo akoonnadaada. Waxa kale oo jira xulashooyin kale oo badan oo ku dar LinkedIn barnaamijyada kale haddii aad isticmaaleyso CRM kale.
Waqtigan xaadirka ah, waxaad ku dhameysatay qaybta hore ee dejinta koontadaada. Hadda waad eegi kartaa oo kaydin kartaa shirkadaha Iibka Navigator ayaa soo jeedinaya. Kaydinta shirkad ku jirta koontadaada ayaa kuu oggolaaneysa inaad raacdo cusbooneysiinta, la soco raadadka cusub, iyo inaad hesho warar u gaar ah shirkadda.
Tani waxay kaa ilaalin doontaa inaad si fiican u war hesho kahor wadahadalkaaga ugu horreeya ee aad la yeelan karto macaamiil macquul ah. Si kastaba ha noqotee, haddii aadan weli hubin shirkadaha ay tahay inaad keydiso, waad ka boodi kartaa qaybtaan oo mar dambe ayaad ku dari kartaa.
Ugu dambeyntii, waxaad u baahan tahay inaad buuxiso macluumaadka ku saabsan noocyada hoggaamiyeyaasha aad raadineyso. Tan awgeed, waxaad geli kartaa macluumaadka ku saabsan gobolkaaga iibka, danaha warshadaha, iyo shaqooyinka aad beegsanayso.
3. Raadi Hogaamiyayaal Iyo Filashooyin
Waxa xiga ee ay tahay inaad sameyso markii aad ku dhameysato dookhyadaada koontada waa raadinta rajooyinka iyo dhisida liisaska hoggaanka. Qaab fudud oo tan loo sameeyo ayaa ah in la isticmaalo Lead Builder - qalab ku dhex jira Navigator Sales oo bixiya miirayaasha raadinta horumarsan. Qofkasta oo isticmaalaya Navigator-ka iibinta, ogaanshaha sida looga faa'iideysto Dhismaha Lead waa tallaabo muhiim ah.
Si loo sifeeyo shuruudahaaga raadinta, waxaad raadin kartaa cinwaanno shaqo ama shirkado gaar ah. Markaad dhamaysid dejinta xuduudahaaga raadinta, dhagsii xulashada Raadinta si aad u aragto natiijooyinka. Navigator Iibiyaha ayaa ku siin doona xog intaa ka sii badan natiijooyinkeeda intaad ka heli lahayd nooca caadiga ah ee 'LinkedIn'.
Midig natiijada kasta, waxaad heli doontaa a Ku keydi sida Lead ikhtiyaar Waxaad u adeegsan kartaa tan si aad u badbaadiso rajooyinka ku habboon. Raadi rajadaada si xikmad leh halkii laga xulan lahaa dadka bakhtiyaanasiibka ah.
Talaabada xigta waa inaad keydiso hogaaminta xisaabta. Halkan, xisaabaadka tixraac shirkadaha aad rabto inaad raacdo si aad ula socoto hadba wixii soo kordha.
Dhinaca bidix ee bogga, waxaad ka heli doontaa dhowr ikhtiyaar oo shaandheyn ah, oo ay ku jiraan warshadaha, magacaabista, magaca hore iyo kan dambe, lambarka boostada, cabbirka shirkadda, heerka waayeelka, iyo sannado khibrad ah.
Intaa waxaa sii dheer, Navigator Iibiyaha sidoo kale wuxuu bixiyaa muuqaal lagu magacaabo TeamLink. Waxaad u isticmaali kartaa TeamLink inaad ku shaandheyso natiijooyinkaaga si aad u aragto isku xirnaanta isku xirnaanta ama kooxda. Haddii TeamLink ay ogaato xiriir shaqsiyadeed oo ka dhexeeya rajadaada iyo xubin ka mid ah kooxda, waxaad weydiin kartaa xiriirkaaga wadaagaan hordhac. Ugu dambeyntii, ka dib markaad ku darto rajooyinka sida hogaamiyaasha, waxaad awoodi doontaa inaad ku daawato iyaga oo ku saabsan tabeelaha 'Leads tab'.
4. Dookhyada Iibinta Filter
Bogga dejinta boggaaga Navigator-ga iibsiga, waxaad ku arki doontaa Dhexdhexaadinta Iibsiga ee dhexda. Laga bilaabo halkan, waxaad soo koobi kartaa liiska macmiilka ee kuugu habboon ee ku saleysan warshadaha, juqraafiga, shaqada, iyo cabirka shirkadda.
Doorbidyadan ayaa soo muuqan doona markasta oo aad fiiriso astaanta rajada. Iyo LinkedIn ayaa sidoo kale ku tusi doonta adiga hogaaminta talooyinka ku saleysan dookhyada aad dejisay.
Tani waa ficil ahaan muujinta ugu waxtarka badan ee sahaminta Navigator. Waxaad sidoo kale ku ordi kartaa raadinta horumarsan labada hogaamiye ama xisaab. Waxaa jira in ka badan 20 miiraha raadinta oo aad ku dalban karto raadintaada. Kuwaas waxaa ka mid ah ereyada muhiimka ah, cinwaanka, shirkadaha shirkadaha iyo waxyaabo kale oo badan.
5. Hubi Hagayaashaaga aad Kaydsan tahay
Bogga bogga Navigator-ka iibka, waxaad kala socon kartaa dhammaan wixii cusbooneysiin ee ugu dambeeyay iyo wararka la xiriira raadadka aad keydisay. Waxa ugu fiican ee ku saabsan Iibinta Navigator waa inaad ka arki kartaa cusbooneysiinta xitaa dadka aan xiriirka kuu ahayn. Dhamaan aragtiyahan ku saabsan rajadaada, waxaad qori kartaa farriimaha InMail (fariimaha tooska ah) si aad ula qabsatid.
Sidoo kale, haddii aad rabto inaad cariiriso fagaaraha cusbooneysiintaada, isticmaal miirayaashaas dhinaca midig ee bogga. Sanduuqa xisaabaadka, waxaad awoodi doontaa inaad ku aragto liiska shirkadaha aad keydisay. Si aad wax badan uga ogaato shirkad, dhagsii ikhtiyaarka Koontada Muuqaalka. Halkaas, waxaad ka heli kartaa sidoo kale ku dar dad badan oo waxaad ka heli kartaa macluumaadka ugu dambeeyay ee ku saabsan shirkadooda.
Intaa waxaa sii dheer, waxaad gujin kartaa xulashada 'Dhammaan Shaqaalaha' si aad u aragto qof kasta oo ka shaqeeya shirkaddaas. Tani waa muuqaal qurux badan oo macquul ah tan iyo markii ay kuu suurta gelinayso inaad ku xirnaato qof kasta oo shirkadda ka tirsan waqti kasta.
6. Dhis Xiriirrada
Waqtigan xaadirka ah, waxaad ogaatay rajadaada waxaadna si firfircoon ula socotay horumarkooda. Hadda, sidee ula xiriirtaa iyaga?
Istaraatiijiyadda ugu fiican ee aad qaadan karto si aad ulaxiriirto akoonnadaada muhiimka ah ayaa ah inaad u dirto farriimo khuseeya oo waqtigooda ku habboon. Iyada oo gacan ka heleysa Navigator-ka iibka, waxaad kula socon kartaa waxqabadyada LinkedIn iibsadahaaga.
Waad ogaan kartaa goorta aad gaaraysid oo aad u dirtid InMails. Farriimaha farshaxanka ah oo u samee shax qaab ku martiqaadaya wadahadal wax ku ool ah. Taasina waa nooca istiraatiijiyadeed ee dhisidda xiriirka ee wadadaada u xaaraya guusha iibinta bulshada.
Si kastaba ha noqotee, Navigator Sales LinkedIn wuxuu leeyahay hal faa'iido oo yar. Waa inaad la xiriirtaa mid kasta oo ka mid ah hogaamiyaashaada gacanta. Tani waxay noqon kartaa waqti aad u badan.
Hal dariiqo oo looga hortago shaqadan canshuuraha ayaa ah in si otomaatig ah howshaada fariin loogu diro Waad ku fududeyn kartaa taas adoo kaashanaya aaladda otomaatiga ah ee LinkedIn.
Xusuusnow in qalabyada otomaatigga oo dhami aysan ammaan ahayn. Haddii aad rabto badbaado iyo waxqabad la damaanad qaado, waxaa ugu fiican inaad doorato Balaadhin nidaamkaaga iibinta bulshada ee otomaatiga. Expandi waxay xaqiijineysaa amniga koontadaada iyadoo fulineysa xadka amaankiisa ee lasocda la socoshada iyo codsiyada isku xirnaanta, u dirida fariimaha saacadaha shaqada ee jadwalka ku jira, iyo meesha ka saarida casuumaada la sugayo oo hal guji ah
Waan ognahay in iibinta bulshada iyo raadintu ay culeys badan noqon karaan haddii aadan qaadan qalabka saxda ah ama ilaha ugu fiican. Isticmaalidda barxad sida Naqshadeynta Iibinta ee LinkedIn waxay kuu oggolaaneysaa inaad dhisto liis ballaaran oo rajo leh si dhakhso leh iyo sidoo kale dadaal ugu yar. Waxaad markaa qaadan kartaa liiskaas oo aad u soo dhoofin kartaa Expandi, taas oo kuu qaban doonta inta badan howlahaaga waqtiga qaadanaya.
7. Fahmitaanka Kireynta Navigator-ka Iibka
Waxaa jira astaamo dhowr ah oo kujira Navigator-ka iibsiga oo aad si weyn u isticmaali karto haddii aad taqaano sida saxda ah ee loo isticmaalo. Tusaale ahaan, haddii aad ubaahantahay xoogaa tilmaamo cusub, Iibiyaha Navigator wuxuu kugula talin karaa hogaamin ku saleysan macluumaadkaaga bogga iyo isticmaalkaaga.
Mar labaad, haddii aad leedahay hoggaan rajo leh laakiin dayactir sarreeya, Sales Navigator wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku wareejiso qoraalo iyo sumado astaanta macaamiisha. Waxay sidoo kale la midoobaysaa CRM-gaaga.
Intaa waxaa sii dheer, haddii aad xiiseyneyso suuq geynta LinkedIn, Istaraatiijiyada Iibiyaha ayaa ku siin doonta aragti ballaadhan. Markaa, waad daawan kartaa cidda dhowaan aragtay astaantaada. Habkaas, waad ogaan kartaa cidda horeba u xiiseyneysay adiga iyo ururkaaga.
8. Bixi Qiimaha Rajada
On LinkedIn, rajooyinka kuwaas oo buuxin doona Xiisaha qayb ka mid ah astaantooda ayaa runtii kuu samaynaysa raalli gelin weyn. Asal ahaan, waxay ku siinayaan liis dhan mawduucyada aad u adeegsan karto sida:
Dood wadaagga si loo fahmo shakhsiyaddooda iyo mudnaantooda si ka wanaagsan
Khariidad waddo oo ku saabsan sida shirkaddaada iyo alaabteeda ay u dabooli karaan baahidooda
Helitaanka in la ogaado waxa hoggaamiyeyaashaadu xiiseynayaan iyo fahamka sida alaabadaadu u siin karto iyaga qiimaha ay raadinayaan waa hab wanaagsan. Waxay ku siin doontaa gacan sarre oo weyn oo ka sareysa tartamayaasha kuwaas oo aan daryeeleynin ku filan si ay u gaaryeelaan habka ay u hogaaminayaan.
9. Ku dar Kordhinta Navigator-ka iibinta Kordhinta Chrome
Waa khiyaano fudud oo waqti iyo tamar badan kaa badbaadineysa. Iibinta Navigator ee kordhinta Chrome waxay awood kuu siineysaa inaad ka dhex aragto astaamaha LinkedIn koontadaada Gmail. Intaa waxaa sii dheer, kordhintani waxay sidoo kale kugu hagi kartaa mowduucyada kala-jajabinta baraha, kuu keydin kara raadadka adiga, waxayna ku tusi kartaa xogta TeamLink.
Haddii aad akhrido illaa iyo hadda, waxaa suurtagal ah hal su'aal oo aad rabto inaad weydiiso:
Navigator-ka iibka ah ee 'LinkedIn Sales Navigator' ma mudan yahay lacagtaada?
Si kooban looga jawaabo, haa, waa. In kasta oo ganacsiyada yar yar iyo ururada iibku ay tahay inay marka hore tijaabiyaan nooca bilaashka ah si ay u arkaan haddii ay mudan tahay maal gashiga xilligan, ganacsiyada waaweyn waa inay hubaal u isticmaalaan barxaddan dhuumaha iibka ka wanaagsan iyo habsami u socodka shaqada.
LinkedIn Iibinta Navigator Demo Otomaatiga Expandi LinkedIn
Tags: b2bsuuqgeynta b2bfidsanhel raadadhel raadad iyo rajoka hel raadadka khadka tooska ahhel rajoLinkedInNaqshadeeyaha iibinta Linkindhaqdhaqaaqa microsoft 365badmaaxe iibkaiibin